Indawo yokuhlala esecaleni kolwandle - I-Airbnb
Indawo yokuhlala esecaleni kolwandle
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguHaisam
Indawo etofotofo apho umntu angaphumla khona aze onwabele ukuhlala eKarachi kufuphi nolwandle. Umntu angakuvuyela ukuba wedwa njengoko iindwendwe ziza kuzibhukishela yonke iflethi. Yonke into kuquka ukutya, ijimu, iibhanki, ukhuseleko, iivenkile zokutyela, ukujonga ulwandle, nezinye izinto ezininzi. Zonke izinto ozidingayo ziyafumaneka apha. Yonwaba!
Iindwendwe zivunyelwe ngokupheleleyo ukuba zingene kumgangatho opheleleyo wendlu kubandakanya indawo yokuhlamba impahla kunye nendawo yokomisa, iindawo zokupaka ngaphandle. Kwimisitho emincinci enenani eliqingqiweyo leendwendwe, uphahla oluhle kakhulu lunokunikwa ukufikelela phantsi kweemeko ezisetyenzisiweyo.
Ikwindawo ekuthiwa yiDHAliday 6 engaselunxwemeni lweKarachi.
Ineevenkile zokutyela ezimangalisayo macala onke kwaye ikufutshane kakhulu neevenkile ezineenkwenkwezi eziphezulu.
Iindawo ezidumileyo ezikufutshane neendawo eziphawulekayo
I-Do Darya clock tower
Kolachi Food chain
Umbuki zindwendwe ngu- Haisam
Ukubuka iindwendwe ngendlela enenkathalo nethemba